22 jri dil ku eedeeysan oo lagu xukumay in ruumanka lagu sii hayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
22 jri dil ku eedeeysan oo lagu xukumay in ruumanka lagu sii hayo
La daabacay torsdag 18 maj 2017 kl 15.44
22-jir ku eedeey-san dilka oo lagu sii wado maxkamad. sawir: Mats Andersson/TT
Wiil 22 jir ah ayay maxkamad maanta ku xukuntay in ruumanka lagu sii hayo, maadaama lagu tuhun-san yahay inuu ka dambeeyey dilkii gabar 19-jir ahayd oo maydkeeda la heley horraantii toddobaadkan. Wiilka iyo gabadha ayuu horay yga dhexeeyay xiriir.
-Waxay u dhimatay dhaawacyo loo geestay oogadeeda, sida uu sheegay xeer-ilaaliye Christer Sammens.
22 jirka iyo gabadha la dilay ayuu horay uga dhexeeyey xiriir dhammaaday. Horraantii sannadka ayaa eed looga soo sheegtay ah inuu jir-dil u geeystay marxuumadda.
Qareenka 22-jirka Bo Karlsson ayaa sheegay inuu ka argagaxay go’aanka maxkamaddu gaartay ee ah in ruumanka lagu sii hayo, maadaama lagu tuhun-san yahay dil. Wiilka ayaa iska dheereeyay dambiga lagu tuhun-san yahay.
-Wuxuu dhiibay sharraxaad ah wixii dhacay habeenkaa, sheekadaasina oo aanay ka muuqan inuu gacan ku lahaa dambiga lagu eedeeyey, sida uu sheegay qareen Bo Karlsson.
Karlsson ayaa ka gaabsaday inuu wax ka yiraahdo inuu macmiilkiisu la kulmay habeenkaa la kulmay marxuumadda iyo in kale.
Gabadha dhimatay ayaa oogadeeda ey ku yaaleen dhaawacyo.
Maydka gabadha aya laga heley fiidn-nimadii habeenkii isniinta war ka ag-dhor beer ey ku taalo guryo la deggen yahay ee nawaaxiga Hudiksvall. Iyda oo arageeduna ugu dambeeyay fiid-nimadii habeenkii abtida ee axaddu soo galeeysay.
22 jir lagu tuhunsan yahay dil gabar iyo laba kale oo oodda laga qaadey
torsdag 18 maj 2017 kl 11.57